Yintoni i-Electroplating kwaye isebenza njani?
I-Electrochemistry yinkqubo apho iindawo zincinci ezincinci zetsimbi ekhethiweyo zihlangene nomnye wesinyithi kwinqanaba le-molecular. Le nkqubo ngokwayo ibandakanya ukudala iseli ye-electrolytic: isisetshenziswa esisebenzisa umbane ukuhambisa iamolekyu kwindawo ethile.
Indlela yokuHlulwa kweeNyulo
I-Electroplating yi-cell electrolytic esetyenzisiweyo esityebileyo sensimbi isetyenziswe kwi-surface conductive surface.
Iseli liqukethe i- electrode ezimbini ( abaqhubi ), ngokuqhelekileyo zenziwa ngentsimbi, ezigcinwe ngaphandle komnye. Ama-electrode abhaptizwa kwi-electrolyte (isisombululo).
Xa kuvuliwe umbane wamandla, ioni ezilungileyo kwi-electrolyte ziya kutshintshela kwi-electrode ehlawulwa kakubi (ebizwa ngokuba yi-cathode). I ions ezintle zi-atom enye i-electron incinane kakhulu. Xa befikelela kwi-cathode, badibanisa kunye nama-electron kwaye balahlekelwa yinto efanelekileyo.
Ngelo xesha, ukuhlawuliswa kakubi kwii-electrode (ezibizwa ngokuthi i-anode). Iimali ezihlawuliswa kakubi zii-atom kunye ne-electron enye ininzi). Xa befikelela kwi-anode enhle bayadlulisela ii-electron zabo kwaye balahlekelwe yintlawulo yabo engafanelekanga.
Ngenye indlela ye-electroplating, isinyithi esiza kutyalwa ikhona kwi-anode yesiphaluka, kunye nenqaku eliza kugqitywa eline- cathode . Bobabini i-anode kunye ne-cathode baxiliswa kwisisombululo esinomncuba wetsimbi esityululweyo (umz., Ion yensimbi ekhutshiwe) kunye nezinye ioni ezenza umsebenzi wokuvumela ukugeleza kombane kwisiphaluka.
Ulawulo olukhoyo lunikezelwa kwi-anode, i-oxidizing i-atom zetsimbi kunye nokuyichitha kwisisombululo se-electrolyte. Ion zinyithi ezixutywayo ziyancitshiswa kwi-cathode, zifaka intsimbi kwinto. Okwangoku kusetyenziswa isiphaluka ukuba isantya apho i-anode ichithwa ilingana nesantya apho i-cathode ifakwe.
Kutheni kutyalwa i-Electroplating
Kukho izizathu ezininzi zokuba ufuna ukugqoka indawo eqhubayo ngensimbi. Isilivere esiliva kunye negolide egugu lwezinto zokugqoka okanye i-silverware ngokuqhelekileyo zenziwa ukuphucula ukubonakala kunye nenani lezinto. Ukufakwa kwe-Chromium kuphucula ukubonakala kwezinto kwaye kuphucula nokugqoka kwayo. Iingubo ze-Zinc okanye ze-tins zingasetyenziselwa ukuba zenze ukuxhatshazwa kwe-corrosion. Ngamanye amaxesha i-electroplating yenziwa kuphela ukunyusa ubungakanani bento ethile.
Umzekelo olula wenkqubo yokhethwa kwe-electroplating yenziwe nge-electroplating yobhedu apho isinyithi kufuneka yenziwe (ubhedu) isetyenziselwa ukuba i-anode kunye nesisombululo se-electrolyte iqulethe i-ion yesitrato esiza kutywala (Cu 2+ kulo mzekelo). I-Copper iya kwisisombululo kwi-anode njengoko igqitywe kwi-cathode. Ukugxinwa rhoqo kweCu 2+ kugcinwa kwisisombululo se-electrolyte esisijikeleze i-electrodes:
i-anode: i-Cu (s) → i-Cu 2+ (aq) + 2 i -
cathode: Cu 2+ (aq) + 2 e - → Iikhi (s)
Iinkqubo eziqhelekileyo zokutyunjwa
OMnxeba Anode Electrolyte Isicelo
Cu Cu 20% i-CuSO 4 , i-3% H 2 SO 4 electrotype
Ag Ag 4% i-AgCN, i-4% yeKCN, i-4% yeK2 CO 3 iigrafti, i-tableware
Au Au, C, Ni-Cr 3% ye-AuCN, i-19% yeKCN, i-4% ne- 3 ye- PO 3 zobumba
Cr Pb 25% CrO 3 , 0.25% H 2 SO 4 zithuthi
Ni Ni 30% i-NiSO 4 , i-2% ye-NiCl 2 , i-1% H 3 BO 3 I-plate base
Zn Zn 6% i-Zn (CN) 2 , i-5% ye-NaCN, i-NaOH ye-4%, i-1% ne- 2 CO 3 , i-0.5% i- 2 (SO 4 ) 3 isinyithi esakhiweyo
Sn Sn 8% H 2 SO 4 , 3% Sn, 10% i-cresol-sulfuric acid amathanga adibeneyo
Ukuba i-Molecule iyancitshiswa Ngaba ifumana okanye iLahle amandla?
I-Ice kwi-Fire Chemistry Ukubonakalisa
I-Equation Equation kunye nendlela yokuSebenzisa ngayo kwi-Electrochemistry
Ukuqonda ukuGuqa kunye nokuLawula ukusebenza
Izikolo zobunjineli eziphezulu kwi-US
U-Mies van der Rohe ufumana u-Sued - Ulwa neFarnsworth
Iiglomelo zasekhaya - Zivela phi na nini?